राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन « Tulsipur Khabar
राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन
तुलसीपुर, २ कार्तिक / आर्थिक बर्ष २०७६/ ०७७ मा राप्ती प्रादेशीक अस्पताल तुलसीपुरले प्रवाह गरेका सेवाका विषयमा जानकारी गराइएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. सर्वेश शर्माले उपचार सेवादेखि भौतिक पुर्वाधार विकासको क्षेत्रमा फड्को मारेको बताएका छन् ।
एक बर्षको अवधिकमा ओपिडी सेवामा ५१ हजार ३ सय ५० जनाले सेवा लिएका छन् भने ४ हजार ४४ जनाले सर्जरी सेवा लिएका छन् । त्यसैगरी सुत्केरी सेवा लिएका ३ हजार ५ सय ८५ जना मध्य सामान्य तरिकाले ३ हजार २३ जना, जटिलखालको ७७ जना र सल्यक्रिया मार्फत सुत्केरी गराएका ४ सय ८५ जना छन् ।
त्यसैगरी दरवन्दी अनुसार २ जना डा. बाह्यक जनशक्ति फुलफिल भएकाले बिरामी हेर्नेको चाप पनि कम भएको मेसु शर्माले बताए । त्यस्तै जग्गा अतिक्रमणमा परेकाले फिर्ताका लागि पहल भइरहेको बताएका छन् । अस्पतालको जग्गा ६ विघाह १७ कठ्ठा छ । जसमध्य डेढ विघाह अतिक्रममा परेको छ । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष पदम प्रसाद न्यौपानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सूचना अधिकारी कुष्ण गोपाल चौधरीले गरेका थिए ।